roller Shutter တံခါးများ
ပွင့်လင်း & Motors က
hardware & ဆက်စပ်ပစ္စည်း
Prepainted သွပ်ရည်စိမ် coil
ကို One Stop Service
1. 11+ နှစ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ, အတွေ့အကြုံများ။
11+ နှစ်ကျော်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကျနော်တို့ဒါပေါ်ဦးဆောင် roller တံခါးများနှင့်ရှေ့ဆောင်ထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူပုဒ်မတံခါးများထုတ်လုပ်သူ, အမေရိကန်, ကနေဒါ, သြစတြေးလျ, ဆော်ဒီအာရေဗျ, ယူအေအီး, ကာတာ, တောင်အာဖရိကမှတင်ပို့မှုများနှင့်ဖြစ်လာကြပါပြီ။
2. ခိုင်ခံ့ R & D ကိုခွန်အား
ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ် roller ရှပ်တာတံခါးများနှင့်ပုဒ်မ overhead တံခါးသစ်ကိုစတိုင်ဖွံ့ဖြိုးအာရုံစိုက်,9အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာတက်လုပ်ထားတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ် techhnical အဖွဲ့ရှိသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ hign အရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန် enhoy စေမည်ဖြစ်သောတင်ပို့ဖို့ထုပ်ပိုး, ကုန်ကြမ်းအရင်းအမြစ်မှ, တစ်ခုလုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတလျှောက်လုံးထုတ်လုပ်မှုဟာတင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားစတင်တည်ထောင်ကြသည်။
4. One Stop စျေးဝယ်။
တစ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့ထိုကဲ့သို့သော roller ရှပ်တာတံခါးများအဖြစ်အလိုအလျှောက်တံခါးများ, အပြည့်အဝအကွာအဝေး, အပိုင်း overhead ကားဂိုဒေါင်တံခါးများ, ထိန်းချုပ်မှုမော်တာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
5. Professional ကအရောင်းဝန်ဆောင်မှု။
သင်သည်သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်အလုပ်ရုံများအတွက် Bestar ကားဂိုဒေါင်တံခါးများရွေးကောက်တော်မူသောအခါ, သင်က၏ဂုဏ်အသရေ, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာခံစားနိုင်။ 24/7 ဝန်ဆောင်မှု & ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ကအချိန်မရွေးသင်တို့အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းစကားတစ်ခုစွန့်ခွာ, ကျေးဇူးပြု. သို့မဟုတ်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူစကားပြော Mobile/Whatsapp: +86-13821967889.
Bestar Automatic တံခါးပေါကျ Co. , Ltd မှ
လူအုပ်စု: + 86-13821967889
မူပိုင်ခွင့်© Bestar Automatic တံခါးပေါကျ Co. , Ltd All Rights Reserved
* CAPTCHA: အဆိုပါ select လုပ်ပါ ကျေးဇူးပြု. မော်တော်ကား